Burburin Biyo Rice Quudiyo Dunida? - 2
1.1 Bare Hore Brown Rice Jawaab Gaajada? by Peggy Bradley
1.1.1 Brown Rice
1.1.2 Dabiiciga Finer
1.1.3 Kordhinta Protocol ee GBR bariiska
1.1.5 Gargaarka Nafaqada
1.1.6 Gargaarka Caafimaadka
1.1.7 GBR oo la jiiday oo la kariyey
Bare Hore Brown Rice Jawaab Gaajada? by Peggy Bradley
Bariisku waa cuntada ugu muhiimsan wadamada soo koraya ee soo koraya, waana cunno nadiif ah oo ku dhawaad ​​kalabar dadka adduunka. Waaxda Beeraha ee Maraykanka (USDA) ayaa qiyaaseysa soo saarka dalagyada bariiska adduunka ee 2007 ilaa 2008 si ay u noqoto illaa 432 million tan. 2005 aagga loo isticmaalo bariis goosashada ayaa ku dhowaad 387 million acres. Cilmi-baaris ayaa hadda lagu hirgelinayaa kor-u-qaadista cawska ee xoolaha sida cilmi-baarista qiimaha korontada ee biya-goyska cagaaran, oo hadda ka mid ah wareegga cuntada.
Derek Cuddeford, qoraaga "Hydroponic Grass" (1989) iyo kuwo kale oo ku jira 1980s waxay fahmeen in caleemaha la soo saaro iyo kuwa cusub ee la kariyey ay leeyihiin qiime cunto oo ka sarreeya miraha hurda. Tani waxay horseeday hirgelinta hidde-wanaajinta si ay u koraan raashinka xoolaha iyo ka dibna baaritaan dheeraad ah oo lagu ogaanayo cuntada la kariyey ee dadka. Shirkadda 2004 ee Shirka Qaramada Midoobay, warqad ka socota Japan ayaa ku dhawaaqday adduunyo cusub oo la yiraahdo Germinated Brown Rice (GBR) ama bariis GABA (Shoichi & Yukihiro, 2004).
Bariiska Brown Bariisiga Brown wuxuu ka sarreeyaa nafaqada ka badan bariiska cad. Bariiska Brown wuxuu leeyahay lakabka korkiisa oo keliya ayaa laga saaray. Bariis cadaan ah, ma sii dheer abuur, waa la jarjaray taasoo keentay in lumiyo vitamiin, macdan, fiber iyo asiidh dufan oo muhiim ah.
Nidaamka qalabka casriga ah ee bariiska cagaarka ah ee bariiska cad ayaa keenaya in lumo ku saabsan boqolkiiba 10 boqolkiiba alaabta. Haddii dadku bilaabeen isticmaalka bariiska buniga halkii caddaan, waxaa jiri kara 38.7 million acres oo laga soo saaro wax soo saarka ama 43 million oo dheeraad ah oo cunto ah oo la heli karo.
Caalamka, waxaa lagu qiyaasaa in ay jiraan 850 million dadka gaajeysan. Wadar ahaan, ugu yaraan 550 million ayaa ku jira Aasiya. Asiishu waxay u isticmaalaan celceliska qiyaasta 300 ee bariiska sannadkiiba. Bariis dheeraad ah oo laga heli karo isbedelka bariiska brown ayaa noqon karta tallaabo muhiim ah oo lagu xallinayo gaajada.
Bariiska Brown ayaa helay qaar ka mid ah caanaha 70s leh cunto diirran, oo ku dooday bariiska brown. Dhibaatooyinka ugu weyni waxay ahaayeen in bariiska brown uu aad u yaraada oo badi bariiska lagu iibiyey weli waa caddaan.
Nidaamkii miraayadda bariiska ee wakhti dheer ah oo la kariyo iyo waxoogaa waxoogaa ah ayay u keentay bariis cad cad ee lumay dhadhan aan diidmo lahayn. Caan ku ah 10 boqolkiiba alaabta.
Bariis cusub oo bariis ah oo ka yimid Japan ayaa dhab ahaantii bariis caleenta ah oo horeyba u soo baxday ka hor inta aan la karin. Bariiska waxaa lagu hayaa heerkul ku saabsan 100 F ilaa siddeed ilaa 24 si loo bilaabo geedi socodka dhalidda.
Daraasadaha badankood ee faa'iidooyinka nafaqada waxaa lagu sameeyey bariis ah oo hadda bilaabay in ay muujiso in yar oo ka mid ah buro (0.5 ilaa 1.0 millimari dhererkoodu ka sarreeyo) laga soo saaro qulqulka, oo sidoo kale loo yaqaan Germined Brown Rice (GBR).
Bariiska GBR ayaa la jilciyay iyada oo loo marayo wax-qabadka waxaana hadda la kariyaa waqti yar. Waxa kale oo ay fududahay in la dheefshiido oo uu leeyahay dhadhan cajiib leh. Dalka Japan wuxuu leeyahay rafcaan balaadhan wuxuuna abuurayaa suuq ganacsi oo leh dhowr shirkadood oo bilaabaya suuqa GBR caalamka.
Kordhinta Protocol ee GBR bariiska
Qaar ka mid ah cilmi baarisyada GBR ayaa haatan jira si ay nooga caawiso inaan fahamno tallaabooyinka lagu bixiyo heerka ugu sarreeya ee nafaqada. Qiimaha cuntada amino acid ee ugu sarreeya ayaa la helaa marka asalku uu bilaabo inuu muujiyo. Qaadashada bariiska dheeraa waxay yareysaa qiimaha cuntada. Marka la baaro qiimaha pH kala duwan (laga bilaabo 5.5 ilaa 9.0) waxaa jiray farqi yar oo qiimaha cuntada nafaqada ah. Heerkulku waa muhiim; heerkulka qabowgu wuxuu u baahan yahay waqti dheer ama ma ogolaan karo biqilka dhan. Bariis miro burcad gaaban oo gaaban ayaa u muuqata inay kor u kacday korodhka GABA.
Saikusa, Horino iyo Mori (1994) ayaa arkay in Gamma-Amirobutyric acid (GABA) ay si aad ah u kordhay markii bariiska cawliga lagu qooyey biyaha 104 F muddo siddeed saac ah saacadaha 24. Enzme decarboxylase Glutamate wuxuu u beddelaa Glutamic acid galay Gamma-aminobutyric acid. Jeexitaanku wuxuu jilicsan yahay lakabka sare ee bariiska, taas oo ka dhigaysa mid fudud sida cunto karinta oo u cuni karto bariis la shiilay.
Falanqaynta nafaqada ee Jarmalka Brown Rice iyo bariiska cad
bariis brown 100g / per miisaanka qalalan biqlay Energy 345Kcal Protein 7.3g Total baruurta 2.9g baruurta 0.58g Cholesterol 0mg Kaarbohaydareedka 77g cuntada fiber 2.8g Sodium Calcium (Na) 2.1mg (Ca) 8.1mg Iron (Fe) 1.1mg Magnesium (mg) 74mg Zinc (amayno) 2.1mg GABA 16.5mg Faytamiin B1 0.3mg Faytamiin E 1.7mg Inositol 452mg Isha: AsiaRICE Biotech., Inc. Bariis cad cad 363Kcal 7.0g 0.9g 78g 0.4g 4g 5mg 0.3m 22mg 1.4mg 1.5mg 0.08mg 0.4mg 96mg XNUMXmg XNUMXmg XNUMXmg
"Waxay soo bandhigtay Brown Rice inay leedahay fiber, seddex jeer tirada lysin, amino acid muhiim ah, iyo 10 jeer qadar GABA. "
Hawlgalka biqilka wuxuu kicinayaa enzymes oo u oggolaanaya bariiska in uu horumariyo heerar sare oo ah astaamaha amino, gaar ahaan Gamma-Aminobutyric Acid (GABA). GBR waxay leedahay fiber badan, sedex jeer qiyaasta lysin, amino acid muhiim ah, iyo 10 jeer qadarka GABA.
Okada et al. (2000) ayaa sheegay inay soo gaartay GABA mudo sideed todobaad ah ay soo hagaagtay calaamadaha ugu caansan ee maskaxda inta lagu jiro xilliga caadada iyo duruufaha ay ka midka yihiin hurdo la'aanta, niyadjab iyo niyadjab. Jeon iyo al. (2003) waxay ogaadeen in GBR ay waxtar u leedahay joojinta dhaawaca beerka.
Waxaa jira baaritaano badan oo lagu sameeynayo faa'iidooyinka caafimaadka ee GBR. Waxay u muuqataa in cunidda cuntada GBR ay hoos u dhigi karto cadaadiska dhiigga, kolestaroolka hooseeya, dib u soo celinta shaqada kelyaha, beerka dayactirka, yareeya daal iyo walaaca wuxuuna ka hortagi karaa kansarka.
Cilmi-baarista sayniska ee GBR ayaa muujisay in isbeddel sahlan ee cuntadeena maalinlaha ahi ay gacan ka geysan karto yareynta cudurrada dabadheeraadka ah iyo kor u qaadidda tayada nolosha.
Way cadahay in laga yaabo inay sababtay in badan oo ka mid ah nooca casriga ah ee casriga ah annagoo u oggolaanay bariiska cad in la soo saaro oo la cuno.
"Cilmi-baarista sayniska ee GBR waxay muujineysaa in isbedelkan sahlan ee cuntadeena maalinlaha ahi ay gacan ka geysan karto yareynta cudurrada dabadheeraadka iyo kor u qaadidda tayada nolosha. "
Enzymes domuzant ee bariiska ee bixiya nafaqada koritaanka ayaa la kiciyaa marka bariiska cawlku uu soo baxo. Tani waxay sii wadaa enzymes waxayna kordhisaa astaamaha amino sida L-lysine (dhismo lagama maarmaanka u ah dhammaan proteinka jirka) iyo -aminobutyric acid (GABA) .Vitamins iyo antioxidants ayaa kordhay, sida xaddiga dheef-shiidka dheefshiidka. Qaybaha nafaqada cusub ee aan laga helin bariiska aan qallajinayn ayaa la sii daayaa inta lagu jiro biqilka, gaar ahaan protylendopetidase inhibitor, taas oo saameyn ku yeelanaysa kahortagga iyo daaweynta hore ee waallida iyo Alzheimers.
GBR oo la jiiday oo la kariyey
Waxaa jira wada-hadal ku saabsan internetka oo la kariyo iyo karinta bariiska GBR ee shaahaaga cagaaran si sare loogu qaado tayada nafaqada. Illaa iyo hadda ma muuqato tijaabo dhab ah ama macluumaad si loo caddeeyo dalabkan. Si kastaba ha noqotee, shaahaaga cagaaran uma muuqdaan inuu waxyeelo u geysto geedi socodka iyo inuu hagaajiyo dhadhanka.